CNC fikosoham-bary Machining
Ny hafa CNC Lathe Machining
Shaft, Holder, ampela
Ring, Circle, Collar Flange sy Gasket
CNC Lathe Machining Computer isa Fanaraha-maso na ny CNC Lathe milina dia ampiasaina mba hamokarana ampahany avy amin'ny fihodinana tehim-voafantina sy nanome sakafo ara-nofo isan-karazany ho ao an-fitaovana fanapahana amin'ny zavatra lalina sy ny lafiny samihafa. Io milina mamela antsika hamokatra mazava tsara amin'ny faritra kely dia kely, na tsy misy fanodinana faharoa. Main Products Ny vy lathe fitaovana sy ny traikefa mihodina in CNC lathe machining manome fahafahana antsika amin'ny fiatrehana ireo ilain'ny malalaka isan-karazany ny mpanjifa fangatahana. Zatra namokatra preci ...
Computer isa Fanaraha-maso na ny CNC Lathe milina dia ampiasaina mba hamokarana ampahany avy amin'ny fihodinana tehim-voafantina sy nanome sakafo ara-nofo isan-karazany ho ao an-fitaovana fanapahana amin'ny zavatra lalina sy ny lafiny samihafa. Io milina mamela antsika hamokatra mazava tsara amin'ny faritra kely dia kely, na tsy misy fanodinana faharoa.
Ny vy lathe fitaovana sy ny traikefa mihodina in CNC lathe machining manome fahafahana antsika amin'ny fiatrehana ireo ilain'ny malalaka isan-karazany ny mpanjifa fangatahana. Zatra famokarana fametrahana mazava tsara vy faritra amin'ny diameters toy ny kely toy ny 0,012 "(0.31 mm) sy ny halavan'ny ho fohy toy ny 0,032" (0.81 mm), ny fitaovana dia afaka ihany koa ny handraisana halavan'ny hatramin'ny 12 "(304.8 mm) sy diameters hatramin'ny 12" (304.8 mm).
Tsy mampiasa ny multi-tanjona lathe fitaovana sy fandaharana CNC fahaizany mba hamoronana ny nahay ny ambonin'ny endriny, avy amin'ny tsotra ny sarotra sy anisan'izany cylindrical sy bongo endriny. Fa fametrahana mazava tsara fanesorana ny vy, ny mahay mampiasa machinists miavaka isan-karazany ny teknika sy ny malefaka turret hitongilanan'ny fandriana lathe amin'ny 12-toerana mba hahazoana turret isan-karazany ny anjara endri-javatra. Anisan'izany (fa tsy voafetra ho) nitodika, mankaleo, ary atsofony, mampiditra kofehy (na anatiny sy ivelany), anatiny nipaipaika, grooving, face grooving, lafiny fiovana, profiling, miatrika, knurling, manapaka-eny, chamfering, nandriatra eny, ary radiusing.
CNC lathe Machining dia afaka nanao izany ny endriny toy ny sary nampiseho, koa, ny fametrahana mazava lathe Machines CNC dia machining fametrahana mazava tsara ny faritra sy ny fanomezana tapa-sarobidy koa tolotra ho an'ny aerospace, ny fifandraisana, ny fitsaboana, sy ny fitaovana elektronika toy ny anao orinasa hafa.
Previous: Andry, Pin
Firaka Glass Fastening Screws
Aluminum 7075 Cnc milina Parts
Aluminum 7075 Junction Box Cnc fikosoham-bary Service
Aluminum Cnc Mampiditra Kofehy nitodika Parts
Cnc Auto Parts fikosoham-bary Parts
Cnc Center milina Parts
Cnc namboarina Medical Fitaovana Part
Cnc Lathe nitodika Parts
Cnc Machining fitaovana elektronika Parts
Cnc Machining Part Fa Production Fitaovana
Cnc Machining nitodika Part
Cnc fikosoham-bary Custom Service
Cnc nijoro Electronic Fitaovana Parts
Cnc fametrahana mazava Aluminum
Cnc fametrahana mazava Part
Cnc Swiss Sokiro Machine Parts
Cnc Swiss Sokiro Machining Parts
Lasa Cnc Parts
Cnc nitodika Drawing Parts Aluminum
Cnc Nanova Hardware Parts
Cnc nitodika Machining Aluminum Parts
Cnc nitodika Metal Parts
Custom fametrahana mazava Machining
Glass Fastening Screws Fa Sale
Mitaky avo Cnc Machining Parts
Lathe nitodika Parts
Metal Cnc fikosoham-bary
Mini Cnc fikosoham-bary
Nonstandard Bushing Manufacturer hamonjy High-Quality Machined Parts
Oem Metal nitodika Lathe Part Cnc Machining
Marina Cnc Machining
Fametrahana mazava tsara Aluminum Machining
Fametrahana mazava tsara Cnc Machined Parts
Fametrahana mazava tsara Lathe Machined Inner Ring Parts
Fametrahana mazava tsara Lathe Machined Pistion Ring Parts
Sokiro Machine Products
Fihodinana Metal Parts
Nampiasa Cnc mitsangana Machining Center